MSF oo joojiyay hoowlihii caafimaad oo uu ka waday Soomaaliya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhakhtar ilmo ku daweeynaya Soomaaliya. Sawirle: William Martin
MSF oo joojiyay hoowlihii caafimaad oo uu ka waday Soomaaliya
Mast: Soomaaliya oo dhan wey ku sugan yihiin dagaal-oogeyaashu
La daabacay torsdag 15 augusti 2013 kl 11.27
Ururka Dhakhaatiirta aan Xuduuda lahayn ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaanno MSF ayaa shaaca ka qaaday iney isaga baxayaan Guud ahaan Soomaaliya, iyada oo middaasina ku sifeeysay ammaanka dartii, sida uu idaacadda caalamiga ah ee raadiyaha Iswiidhen u sheegay madaxa laanta ururka ee dalka Iswiidhen Johan Mast:
Laga soo bilaabo sannadkii 1991 oo aannu ku tallaabsaney in aannu ka howlgalno dalka Soomaaliya ayaa carrigaa lagu diley shaqaale gaarsiisan 16, iyada oo 7 kalena loo geeystey afduub. Waxyaabahaa oo dhan kolka la isu geeyo ayey noo muuqatey ineynaan sii wadi karin howlaha aannu carrigaa ka wadney, sida uu sheegay Johan Mast, sheegayna isaga oo hadalkiisii sii wata insay sii adkaatay cimilada ay howlwadeennada ururka ku howlgalaan maadaama ey kooxaha hubeeysan iyo howlwadeennada hayaduhuba ey gacan ku leeyihiin ama indhaha ka qarsaneyaan weerrarada loo geeysaneyo howlwadeennada ururka dhakhaatiirta aan xadka laheyn.
Xaaladda ammaanka ayaana ah sababta ugu wacan in aannu boorsooyinkeenna ka soo laalaabano Soomaaliya. Waa xaalad aad u adag, xaalad ammaandarro oo la soo gudboonaata shaqaalaha iyo bukaan-socodkaba. Looma qiimeeyo hoowlaha kaalmada bani'aadminimo mid dhexdhexaad ka ah waxyaabaha halkaa ka dhacaya, sida uu sheegay Johan Mast, madaxa laanta dhakhaatiirta aan xadka laheyn ee dalkan Iswiidhen.
Laga bilaabo 1991 oo Soomaaliya uu ka dilaacay dagaal sokeeye oo sii daba dheeradey ayuu ururka MSF goob joog ka ahaa goobo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah sidii uu gacan uga geeysan lahaa xaaladda caafimaad-darro ee bulshada rayidka ah ku heeysatey Soomaaliya. Mar uu Johan Mast ka warramayey hoowlihii sannadka ey maatida u qabteen waxaa ereyadiisii ka mid ahaa:
Sannadkii hore ayaannu ka umuliney hooyooyin dhallaan kor u dhaafeya toddoba kun, oo aan heli doonin daryeelkii caafimaad oo ey u baahnaan lahaayeen. Illaa iyo iminka sannadkan ayaannu u fidiney daryeel caafimaad bukaan socod tiradoodu gaarsiisan yihiin 300 000 oo ruux haddey noqon lahayd dhalliin, nafaqa-darro iyo qalliin. Hoowlahaasi oo dhamina halkaa ayey ku istaageen, sida uu sheegay.
Goobaha uu ururku hoowlaha ka wadey oo ka kooban goobo ku yaala koonfurta, baryamaha iyo waqooyiga Soomaaliya oo soomaaliland ka mid tahay ayuu sheegay Johan Mats iney dhammaan albaabada u soo laabi doonaan ammaanka dartii. Iyadoona ey u caddaatey inaaney haba yaraatee ku howlgeli karin ammaan-la'aan aawadeed.
Ma waxaad leedahay in ammaandarro middaa la mid ah ey ka jiraan gobollada waqooyi?
Haa, sidaa ayaan ula jeedaa. Waxaa jirta in kooxaha dhibaatooyinka nagu haya qaasatan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ku sugan Soomaaliland oo si aan hakad laheyn isaga goosha. Waxaan marka u aragnaa iney halis tahay. Waxaanan oran karaa in eynaan dammaanad qaadi karin ammaanka shaqaalaha ee Carrigaa, kolka aan ka soo baxno Soomaaliya inteeda kale.